Ciyaarta Moto Z4 waxaa cadeeyay hay'ada FCC | Androidsis
Telefoon casri ah oo Motorola ah oo nambarkiisu yahay 'XT1980-3' ayaa shahaado ka helay Guddiga Isgaarsiinta Federaalka (FCC) ee Mareykanka Waxaa la isla dhexmarayaa inay isku mid tahay Moto Z4 Ciyaaraha taasoo aan horay uga soo hadalnay waqtiyadii la soo dhaafay.
Dukumiintiyada ay siideysay wakaalada ayaa waxaa kujira macluumaad yar oo kusaabsan qeexitaankeeda iyo cabirkeeda, laakiin wax bay noo sheegaan. Faahfaahin dheeraad ah hoos.
Diiwaangelinta FCC ee Motorola XT1980-3 ayaa muujisay taas qiyaastii 157 x 75 mm. Telefoonka casriga ah Moto G7 Plus kaas oo lagu dhawaaqay bishii Febraayo sidoo kale cabirkiisu yahay 157 x 75mm. Marka waxay u egtahay in XT1980-3 lagu qalabeyn doono 6.2-inch FullHD + shaashad, sida midka Moto G7 Plus.
Iyadoo loo marayo FCC waxaa sidoo kale la ogyahay in XT1980-3 waxaa lagu qalabeeyaa batroolka 3,600 mAh oo taageera 18 W xawaare degdeg ah Oo markay tahay isku xirnaanta, waxaa ka buuxa waxyaabo sida 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth LE, GPS, GLONASS, NFC, iyo FM radio. Ma jiro wax macluumaad ah oo laga heli karo qeexitaannada kale ee taleefanka in kasta oo la tilmaamayo, haddana sidoo kale ma jiraan caddaymo la taaban karo oo muujinaya in taleefanka XT1980-3 uu yahay, dhab ahaantii, Moto Z4 Play.
Sanadkii hore, Motorola ayaa bilaabay Moto Z3 Ciyaaraha bishii Juun. Markaa shirkadda ay leedahay shirkadda Lenovo waxay u badan tahay inay qorsheyneyso inay soo saarto beddelkeeda isla waqtigaas sannadkan.
Xanta ku xeeran Moto Z4 Play ayaa daaha ka qaaday taas waxaa lagu qalabeyn doonaa 6.2-inji oo S-AMOLED ah oo leh qashin-biyood. Waxaa la filayaa inay la timaaddo qalab akhristaha shaashadda ku jira iyo in Snapdragon 675 chipset ku dheji taleefanka casriga ah oo ay weheliso 6GB RAM. Sidoo kale, waxay la socotaa keyd lagu rakibay 128GB. Joogitaanka isku xiraha birlabta si uu isugu xiro Moto Mods ayaa ka duwanaan doona taleefankan taleefannada kale ee dhexdhexaadka ah. Telefoonka ayaa lagu rari doonaa Android 9.0 Pie, kaas oo bixin doona khibrad u dhow saamiga.
Waxaa lagu xantaa, marka laga reebo, in Motorola Moto Z4 Play waxaa lagu qalabeeyaa 5 megapixel S1KGM48SP sensor oo ka socda Q Technology. Waxaa la filayaa in lagu soo bandhigo moodooyin ay ka mid yihiin 4 GB RAM + 64 GB oo keyd ah iyo 6 GB RAM + 128 GB oo keyd ah. Ma jiro wax macluumaad ah oo ku saabsan qiimaha Z4 Play.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Motorola's Moto Z4 Play ayaa imanaya - hadda wuxuu helayaa shahaadada FCC
Spark, oo ah mid ka mid ah macaamiisha emayllada ugu fiican ee IOS, ayaa sidoo kale laga heli karaa Android